SAI KAUNG's blog on decentralized web
Colourful skyIt looks likeapainting.........
Highway road.......The main route for transportation and cargo from Shan State to Central Myanmar.
Lighting festivalအားလုံးပဲ သီတင်းကျွတ် အချိန်ခါ သမယမှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ....... Sai kaung zaw thant Msc- 261
Disciplinesစည်းကမ်းဟူသည် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မရှိမဖြစ်သော အရာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စည်းကမ်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာနားလည်သူ လိုက်နာသူ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင် ရှားပါးလှသည်။ စည်းကမ်းကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သည်ဟုသာ
Cherry bloomsomချယ်ရီတွေလည်း ငုံလာခါစရှိသေးတယ် တွယ်တာစိတ်လည်း ရင်ထဲမှာပေါ်လာဆဲကွယ်...........
အိုဘယ့်ရခိုင်မြေအိုဘယ့်ရခိုင်မြေ(၄)(သိမ်း) ပြတိုက်မှထွက်ခွာလာပြီးနောက် သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးသည် အလွန်ထူးခြားသော ဗိသုကာလက်ရာဖြင့် တည်ထားသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။စေတီတို့သည်
အိုဘယ့်ရခိုင်မြေအိုဘယ့်ရခိုင်မြေ(၃) ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီး လည်ပတ်ပြီးနောက် ဇိနမာရ်အောင်ဘုရားသို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ မြောက်ဦးတွင် မာရ်ငါးမာရ် ရှိပြီး မြောက်ဦးသို့ရောက်လျှင် ထိုစေတီငါးဆူစလုံး ဖူးသင့်သည်ဟုဆိုသည်။
အိုဘယ့်ရခိုင်မြေအိုဘယ့်ရခိုင်မြေ(၂) နောက်တစ်နေ့တွင် စစ်တွေမှ မြောက်ဦးသို့ ကားဖြင့်ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ မူလကတော့ စက်လှေဖြင့် သွားရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသော်လည်း ရာသီဥတုမှ မိုးရောလေပါ ထန်နေသောကြောင့် ထိုအစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်။
အိုဘယ့်ရခိုင်မြေအိုဘယ့် ရခိုင်မြေ(၁) ရခိုင်…..မြန်မာပြည်၏ အနောက်တံခါး….ယဉ်ကျေးမှုတို့မြို့ပြနိုင်ငံတိုင်အောင် မြင့်မားခဲ့သော ဒေသသို့အလည်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ဦး ဝေသာလီမြို့ဟောင်း စသည်ဖြင့် ကြားဖူးနေ၊ စိတ်ဖြင့်သက်သက်သာ
Verification for super 8 Ball Club GameMy steemit name is @saikaungzawthant and my tracking name us sai. I heard about super 8 ball club from Dun Juan (@donjaun). It isanew way to earn steemits by playing game. I tried inapractical mode
Introduction myselfအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့် နာမည်က စိုင်းကောင်းဇော်သန့်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စိုင်းကောင်းလို့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်ကပါ။ တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေပါတယ်။ ပေ ၄၇၀၀ အထက်မှာရှိတဲ့